Unxibelelwano lwe-Intanethi lwe-LAN: Intambo kunye ne-Wireless
Ngu-John R. Levine, uMargaret Levine Young
Ukujonga ukusebenzisana kokutya kweziyobisi
Ungaqwalasela ukusebenzisa inethwekhi yendawo (LAN) ukuxhuma kwi-intanethi. Ii-LAN ziza kwiindidi ezimbini ezisisiseko: i-wired kunye ne-wireless. Kwinethiwekhi enentambo, intambo ibaleka ukusuka kwikhompyuter nganye iye kwibhokisi esembindini, ngelixa inethiwekhi engenazingcingo isebenzisa imiqondiso yerediyo kuneentambo. Nokuba yeyiphi indlela, ufuna ibhokisi esembindini.
Ukuba zonke iikhompyuter zakho zikwigumbi elinye kwaye awuzihambisi (okanye ulungile xa udlala umbane wasekhaya), inethiwekhi eneentambo yeyakho. Ngaphandle koko, i-wireless kulula kakhulu ukuyicwangcisa, nangona inethiwekhi enesiphumo ihamba kancinci. I-Combos nayo inokwenzeka; uninzi lwezixhobo ezingenazingcingo zineejack ezimbalwa zeentambo zokudibanisa kwiikhompyuter ezikufutshane ngokwaneleyo ukuba ziqhube iintambo.
Ibhokisi embindini-ihabhu, iswitshi, okanye umzila
Ngalo naluphi na uhlobo lwe-LAN yangoku, udinga ibhokisi ekhethekileyo edibanisa yonke into. Nazi iintlobo eziphambili zebhokisi ekufuneka ukhethe kuzo:
UKUYA hub okanye tshintsha yibhokisi ebungakanani bencwadi eneqhekeza leejethi kwiintambo zenethiwekhi. Isebenza njengendawo yokudibanisa enentambo edibanisa zonke iikhompyuter zakho kwi-LAN. Iswitshi inesekethe encinci eyongezelelweyo ukukhawulezisa izinto.
Yimalini iarimidex inyusa ukusinda
An indawo yokufikelela yi-wireless elinganayo yehabhu, ene-eriyali ye-eriyali okanye ezimbini kunye nejack enye yokuqhagamshela kuthungelwano olunentambo.
UKUYA umzila iyafana kwihabhu okanye indawo yokufikelela (okanye zombini) ngokudityaniswa konxibelelwano lwe-intanethi njenge-firewall.
Abanye ababoneleli bakunika imodem edibeneyo kunye nomzila. Ukuba bayakwenza, nonke nisetiwe, akukho zixhobo zifunekayo.
Yiya kwi-router ukuba umboneleli wakho akakunikanga; ixabiso eliphantsi ($ 40 ukuya kwi-80 yeedola), kwaye likusindisa iintsuku zosizi olukrazula iinwele kuba ligcina uninzi lweentshulube ngaphandle kwenethiwekhi yakho. Nge-router, akukho nanye kwiikhompyuter zakho ekufuneka ikhathazekile malunga nokunxibelelana ne-intanethi- i-router iyayiphatha.
thatha iiprobiotic ngamayeza okubulala iintsholongwane
IiRouters ziza zombini kunye neenguqulelo ezingenazingcingo. Iinguqu ezinentambo zinamanani ohlukeneyo eejacks, ezingenazingcingo zinejack enye yekhebula kwimodem, i-eriyali yenethiwekhi engenazingcingo, kwaye zihlala zinejack ezimbalwa zokuhambisa iingcingo kwiikhompyuter kwigumbi elinye.
Ngenxa yesizathu esigqwethekileyo, ii-routers ezingenazingcingo zihlala zitshiphu kunezintambo, nangona ezo zingafakwanga ngaphandle kweengcingo zibandakanya yonke into eyenziwa zii-wired kunye nerediyo engenazingcingo. Ke fumana umzila ongenazingcingo. Ukuba ufuna iijeki ezingaphezulu kwendlela yakho, fumana iswitshi eshibhile; sebenzisa intambo ukusuka kwenye yeejack zayo ukuya kwenye yeejack kwi-router yakho kwaye iya kuba yinethiwekhi enkulu eyonwabileyo.
Ukurenta okanye ukuthenga?
Ababoneleli abaninzi baya kubonelela ngokukuqeshisa imodem, i-router, okanye zombini, ngesiqhelo ngexabiso eliphantsi, eliphantsi le- $ 5 ngenyanga nganye. Le kunqabile ukuba ibe sisivumelwano esihle. Ungathenga i-router yakho okanye imodem kwivenkile enkulu yebhokisi emalunga ne- $ 75, kwaye i-arithmetic encinci ityhila ukuba uza kugcina imali emva konyaka onesiqingatha. I-Modem kunye netekhnoloji ye-router itshintsha kancinci, kwaye ezi uzifumanayo ngoku kufuneka zikukhonze iminyaka emihlanu okanye nangaphezulu.
Ukuba unenkonzo yeDSL kwinkampani yefowuni, baya kuhlala bebonelela ngemodem ngaphandle kwentlawulo eyongezelelweyo kuba kufuneka ihambelane nazo naziphi na izixhobo zeDSL abazisebenzisayo ekugqibeleni. Iimodyuli zekhebula, kwelinye icala, zimiselwe emgangathweni ngokusesikweni kusetyenziswa into ebizwa ngokuba yi-DOCSIS. Umbuzo kuphela kukuba ukufumana i-DOCSIS inguqu yesi-2 okanye yesi-3, ngempendulo ingu-3 kuba iyakhawuleza.
Ukuba ufumana eyakho i-router, ukuyicwangcisa kuyafana nokuba ufumene enye kumboneleli wakho. Ukuba uthenga imodem yakho yekhebula, inkampani yekhebula kufuneka yazi idilesi yayo ye-MAC, isazisi esineempawu ezili-12 esiprintwe kwisitikha semodem. Ukuba uthenga imodem ngaphambi kokuba ufakele inkonzo yakho, isifaki siza kufaka imodem kwaye sibize kwidilesi ye-MAC.
Ukuba uyayitshintsha imodem ngokwakho, akukho nzima kakhulu. Imodem inezidibanisi ezintathu, isixhobo sokudibanisa intambo, isixhobo sokudibanisa iipini ezininzi ze-RJ-45 ze-Ethernet kwi-router yakho, kunye nesinxibelelanisi samandla soluhlobo oluthile, mhlawumbi ucingo olucekeceke kwi-adaptha yamandla. Cima nje imodem endala, qhagamshela imodem entsha ngendlela efanayo (sebenzisa iadaptha yamandla entsha eza nemodem entsha), emva koko fowunela inkampani yakho yekhebula ukuba ubanike idilesi entsha ye-MAC.
Yonke le nkqubo akufuneki ithathe ngaphezulu kwemizuzu eli-10, inike okanye ithathe ixesha elingakanani ikugcinile.
naproxen kagqirha 500 mg
udidi lokukhulelwa x fda
Hlela igama ledatha ngekholamu r
ii-quadratic equations kubomi bokwenyani
ukukhululwa kancinci kokuncedisa isinyithi
idosi ephezulu ye-ibuprofen